IiHacks eziVumayo 🥇 Ukukopa, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
Ukujonga ukufumana izandla zakho kwiHacker yeHacker ethembekileyo? Nge Gamepron, nantoni na enokwenzeka! Ngeempawu ezifumanekayo kuphela ezisongelwe kwiphakheji engafumanekiyo, yeyona Cheat yeValorant ilungileyo oza kuyifumana.
Sele uyithengile iHackor Hack? Fumana amanyathelo alandelayo apha
Nceda uqaphele: Phambi kokuba uthenge iiValantant hacks zethu, qiniseka ukuba isixhobo ojonge ukusithenga sihlaziyiwe kutshanje okanye sisekwi-intanethi. Ngelixa sihlala sihlaziya izixhobo zethu, kukho ukulibaziseka ngexesha lokuhambisa kwezinye iimeko; Ngelixa ihlala ikhawuleza, inokuthatha iiyure ezimbalwa. Zonke izixhobo zethu zitshixiwe nge-HWID, oko kuthetha ukuba ungazisebenzisa kwikhompyuter enye-qiniseka ukuba ikhompyuter yakho iyahambelana nazo zonke izixhobo zethu kwangaphambi koko. Akukho mbuyiselo iya kunikwa wakube UKUJONGE isitshixo semveliso!
Onyuliweyo wethu Iyasebenza Hacks
IiHacker Valantant, iAimbot, iNorecoil, i-ESP, iWall Hacks kunye nokunye
Thenga Iyasebenza IiHacks ngaphakathi 4 amanyathelo
Khetha umdlalo ofuna ukuthenga isitshixo semveliso kwiGamepron (okuninzi onokukhetha kuko!)
Ukusuka apho uya kufuna ukukhetha i-hack efanelekileyo kwiimfuno zakho (iAimbot, iWall Hack, njl.
Yenza intlawulo yakho usebenzisa iprosesa yethu ekhethekileyo kunye nekhuselekileyo yokuqinisekisa, ukhuseleko lwabathengi
Nje ukuba uthenge isitshixo ungayisebenzisa ukufikelela kwii-hacks / cheats zakho!
Kutheni i-Gamepron Valorant hacks?
Iidevs zeValorant zenze umsebenzi obalaseleyo wokugcina umdlalo uhlaziywa, kwaye ngokukhutshwa kwePatch 3.04, kukho utshintsho oluphawulweyo kumdlalo. Olunye lolona tshintsho luphawuleka ngakumbi lubandakanya indlela izibalo zokusebenza ezilandelwa ngayo, kubandakanya ukusetyenziswa kwememori yekhompyuter yakho kunye nokulahleka kwepakethi.
Uhlaziyo lwamva nje lweValorant ikakhulu lujolise ekuphuculeni ukusebenza kwangaphakathi komdlalo ukuze ujongeke ngcono. Izibalo ezisetyenzisiweyo ukuphikisa ukucheba ziphinde zasebenza ukuze ukucoca kungafane kuxhaphake, nangona ungalindelanga ukuba kupheliswe ngokupheleleyo.
Isiziba seValorant 3.00 sazise iarhente entsha kumdlalo: KAY / O, nangona isiziba sikwabona notshintsho olongezelelekileyo. Umzekelo, zonke izixhobo zitshintshiwe ukuze zikwazi ukulingana ngakumbi, kwaye iiarhente ziye zalungelelaniswa kwakhona ukuze izakhono zazo zingenzi ukuba imeta ikhethe enye.
Ipali elandelayo yeValorant yayenzelwe ukuba ibe yiPatch 2.10, kodwa iye yalibaziseka kwaye utshintsho lwayo endaweni yoko lwatyhalelwa emva kwiPatch 2.11. Isizathu soku kukuba imidlalo yeRiot iza kusebenza ekuqhubekekiseni phambili injini yomdlalo ukuze kube lula ukuyihlaziya kunye nokuphumeza izilungiso zegciwane.
I-Valorant ayingomdlalo kwabo batsha kwimidlalo yokudubula, kwaye sinokuthi kungcono ukuba bashiye abo bebedlala izihloko ze-FPS ukusukela besengumntwana! UValorant wenze uphawu kumzi mveliso kulo nyaka ngokumangalela ubuchule kuyo yonke enye into, kwaye kubonakala ngathi bayenzile ngokuqinisekileyo loo nto - abantu abadlala umdlalo baya kukuqonda ukwaneliseka kokutsiba ngokukhawuleza kwikona kwaye badubule ukakayi. Ngeempawu ezingafakwanga njengeValorant Aimbot, i-ESP, iWall Hack, kunye neNoRecoil, sibeka amandla emidlalo yobungcali ngqo ezandleni zakho.
Zininzi iinkathazo eziza nokudlala iValorant, kwaye ukuba uvula umdlalo okokuqala ungoyikisa (ukutsho nje okuncinci). Akukho sistim sokumisela esime ngoku sithetha ukuba wonke umntu uzakudityaniswa, akukho "buchule bokulinganisa" ukwahlula abadlali. Ngenxa yoko, uya kuba nakho ukuphindaphindwa de ube uphuhle izakhono ozifunayo ukuze ukhuphisane. Abanye bethu abanalo ixesha elifunekayo lokuphucula izakhono zethu kwiValorant, kwaye abanye abafuni kuphazamisa- yiyo loo nto iiHackpron Valorant Hacks zethu zikwimfuno ephezulu kangaka!
I-Hack yethu eyiValorant yayiqale yadalwa ukuze ihambisane neemfuno zabadlali kulo mdlalo, njengoko siyiqonda ukuba iza kukhula ukusuka apha. Ukuba ufuna ukufaka unyawo lwakho emnyango kwaye ube yinkosi yokwenyani yeValorant, usebenzisa iiHack Valorant Hacks zethu kunye nokukukhohlisa kuya kukusa "kwincopho" yakho ngokukhawuleza okukhulu kunayo nayiphi na enye indlela. Umnikezeli wakho we-hack ophakathi uza kujonga izixhobo zethu, kuba baya kubuza ukuba sikwazile njani ukupakisha izinto ezininzi ezikumgangatho ophezulu kwiphakheji encinci ecocekileyo! Zonke ii-cheats zethu zi-100% azibhaqwanga ngokunjalo, ke awunakukhathazeka malunga neenkqubo zokuchasana nokubambisa kuwe.
Sukuchitha kude phambi kwescreen sekhompyuter yakho uzama ukukhuphisana nokubila, vumela nje iiVerant cheats zethu kwaye ubukele amanqaku akho! Baninzi oonobumba oba kusetyenziswa kwiValorant, kwaye ngelixa amandla abo eza kwahluka, uya kuhlala unenqanaba elingaguquguqukiyo lesakhono sokuthembela xa uneGoldpron ecaleni kwakho.
Valorant Wall kugula (ESP)
Ulwazi lomdlali we-Valorant ESP (Igama, imivalo yezeMpilo, umgama)
Into yeValorant ESP enezihluzo
Izilumkiso ezilumkisayo zotshaba
Imowudi yokutsiba okubalaseleyo (akukho monakalo wokuwa xa uyenzileyo).
Ithambo elisebenzayo kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa.
Valorant Buyisa imbuyekezo
Ngokufanelekileyo Iyasebenza yimfumba Iimbonakalo
Ukubona abadlali botshaba ababemise inkampu okanye babekwe ngasemva kweendawo eziqinileyo / ezi-opaque zenziwa lula xa unamandla okwenza i-Player ESP yethu.
Ulwazi lomdlali olungileyo luhlala lufumaneka nge-ESP yethu eyiValorant, ekuvumela ukuba ubone amagama abadlali, imivalo yezempilo, kunye nemigama yabo.
Ukwazi ukuba zeziphi izixhobo kunye nezinto umchasi wakho asebenza nazo kunokuba nzima ngamanye amaxesha. Yiyo loo nto into ye-ESP enezihluzi kubalulekile ukuba ibandakanywe kwiValorant Hack yethu.
I-Aimbot yethu eyiVororant iya kunceda ukukusa kwithemba elithembisayo uye kwingcali epholileyo ngokuchaneka okuhlekisayo, ishiya abachasi bakho bethe khamnqa.
Umkhondo weValorant Bullet (osebenzayo kwimigama emifutshane naphakathi)
Sebenzisa i-Aimbot yethu eyiValorant ukugcina umkhondo weebhulethi zakho kunye nenqaku le "Bullet Track" (elilungele zombini imigama emifutshane kunye naphakathi).
Umyalezo wesilumkiso uya kuvela kwiscreen sakho xa utshaba lujolise kuwe okanye kwenzeka nje ukuba usondele kufutshane.
Imowudi yokutsiba okubalaseleyo (akukho monakalo wokuwa xa uqalile ukusebenza)
Abasoze balindele ukuba wehle kubude obunjalo! Sebenzisa indlela yethu yokutsiba okuphezulu ukuthintela ukuthatha umonakalo xa udlala iValorant.
Ithambo elifanelekileyo kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa
Qwalasela iValorant Aimbot nangona ungathanda! Izayo zixhotyiswe ngokuBekwa phambili kwamathambo kunye nezinye iindlela ezinokuqwalaselwa kubandakanya
Iitshixo ezibonakalayo ze-aimbot
I-Aimbot yethu eyiValorant ikwaxhotyiswe ngenkangeleko "yokuKhangela okubonakalayo", ikunika ithuba lokujonga apho iimbumbulu zakho zenza khona impembelelo.
Ukubuyisa imbuyekezo yinxalenye enkulu yeHackerant Hack yethu, njengoko ikuvumela ukuba udubule kwiintshaba zakho ngaphandle kononophelo emhlabeni.
Yiba nguMdlali oGqwesileyo oBalaseleyo eMhlabeni!
Ibango elinenkalipho lokwenza, liyinyani, kodwa siyayazi indlela ezinokuba namandla ngayo iiHackerant Hacks zethu kwizandla zabadlali abadlala kakuhle. Unokuba ngoyena mdlali ubalaseleyo emhlabeni, konke okuza kukuthatha kukuzinikezela kunye nokufikelela kweyona misebenzi yeValorant inokuthenjwa ngeenxa zonke. I-Gamepron ijonge ukukunceda ube nempumelelo engaphezulu (kunye nolonwabo ngakumbi!) Ngelixa udlala uValorant!
IiHacks eziQhelekileyo eziDumileyo kunye nokukhohlisa
IValorant ESP kunye neWallhack
Ezinye iiHacks eziQinisekayo kunye nokukhohlisa
IiHack Valorant kunye ne-Cheats ziye zanda ekuthandeni kwezi nyanga zimbalwa zidlulileyo, njengoko umdlalo ukhutshwe ngokusesikweni ngo-2020. Sisoloko sizama ukuhlala ngaphezulu kwezinto apha eGamepron, yiyo loo nto besisoloko sijonga kwezona zidumileyo Iimpawu ezikhoyo ngaphakathi kwayo nayiphi na into eValance Hack. Asibandakanyi kuphela izinto ezithunyelwe ngabasebenzisi bethu kakhulu, kodwa sikwaquka izinto ezimbalwa ongakhange ulindele ukuzibona! Ukugcina ubukho bethu njengenkokeli ngaphakathi kuphuhliso lomnqweno yimfumba, sihlala sikhangela iindlela zokuphucula ukukopela kwethu-yiyo loo nto saziwa njengomboneleli # 1 weValorant Hacks kwi-intanethi!
Xa ufuna ukufikelela kweyona ndawo ithandwa kakhulu yiValorant Hacks kunye nokukhohlisa kwi-intanethi, i-Gamepron izakukugcina ulungiselelwe kwaye ukulungele ukuqengqeleka. Akukho nto ichazayo ukuba siza kunika abasebenzisi bethu ngokulandelayo, kude kube lelo xesha ungalawula ngoku kukhutshwa iiValorant Hacks zethu kunye nokukhohlisa.
Ii-Aimbots ziya kuhlala ziyinxalenye ebalulekileyo yoluntu oluqhekezayo okokoko sinokuthi sixele kuba ukuchaneka kuya kuhlala kugqiba ukuba ngubani ophumelele umpu eValorant. Akukho ziphumo zingacwangciswanga ekufuneka zibekho, njengoko uza kuvuzwa ngokufaka kwakho umsebenzisi-yiyo loo nto ukuphanga eValorant kuyinto efanelekileyo ukuyenza. Ngelixa abanye beza kubila ngehempe zabo, uya kuba uxakeke ngokungakhathali udubula onke amaqela ezantsi. IValorant Aimbot yethu ixhotyiswe ngobuninzi beempawu eziluncedo, zonke eziya kukuvumela ukuba uthathe nawuphi na umdlalo oyinxalenye yawo.
Ukuthandwa kokuBekwa phambili kwamathambo kunye neAuto-Aim / yoMlilo zikhona apha, kodwa uya kuqaphela ukuba iValorant Aimbot inezinto eziCetywayo zeSmooth ngokunjalo. Ungajika ukubulala kwangoko kwaye ukhuphe abachasi ngokuthanda kwakho, kwaye ungenza njalo ngaphandle kokutsala umdla kuwe. Uza kudlala umdlalo ongenamsebenzi we-K / D Ratio ngeeValantant cheats zethu ezenziweyo!
Sebenzisa i-ESP yethu eyiValorant kunye neWall Hack ayizukuvumela kuphela ukuba uphumelele njengomdlali wedwa, kodwa iya kuthi inike neqela lakho amandla ngokunjalo. Ukuba unxibelelana neendawo zotshaba kubo, banokukunceda kwaye bakuncede uphumelele imidlalo emininzi-unokukhetha nokuthi cwaka kwaye ugcine ngakumbi ukubulala ngokwakho! Ukusebenzisa i-ESP yethu eyiVororant kuyakuvumela ukuba ubone ukuba loluphi uhlobo lwemipu oyisebenzisayo umdlali wakho, kunye nokuba bangakanani na impilo abasele nayo (nokuba basondele kangakanani / bakude kangakanani kuwe). UValorant Wall wethu wokuGqobhoza uya kuhlala elungile ekuboneni iinkampu ezihleli zijikeleze iikona kunye nezakhiwo, ngakumbi eValorant.
Ukuba ukhe wadlala uValorant ngaphambi kokuba wazi ukuba ukukhangela kwikona yinxalenye enkulu yomdlalo, kwaye inokuba yeyona nto ichazayo ukuba ngubani ophumelele umjikelo. Uyakwazi ukubona nantoni na nayo yonke into nge-Valorant ESP kunye neWall Hack enikwe amandla, ke awunakhathazeka ngokukhangela intloko yakho kwaye utshatyalaliswe.
Iimpawu zeenyawo zeValorant Hack yethu iluncedo olukhulu kuyo nayiphi na indlela oyidlalayo, njengokugcina umkhondo weentshaba zakho akuzange kube lula oku. Xa uqwalasela inyani yokuba une-ESP eyiValorant kunye neWall Hack ngaphezulu koku ukuze usebenze nayo, akukho mphefumlo udlala iValorant enokuzifihla emehlweni akho. Uza kubona yonke into eqhubekayo kumdlalo, kwaye xa ubona iiNyawo ezikukhokelela kwixhoba, unokwenza amandla oMonakalo oMkhulu kwaye uziphelise ngokukhawuleza.
Umgama omde ulungele ukukwazisa ukuba ingaba utshaba luyahamba na okanye akunjalo, ukuvumela ukuba uchonge iinkampu ngokungxama. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa uya kuba nakho ukubona ukuba umntu othile uzama ukutyhalela ngakwisikhundla sakho-nantoni na eyenzekayo xa isenziwa lutshaba, uya kubafunda njengencwadi. Ukudityaniswa kwazo zontathu izinto kukunika ithuba kulo lonke idabi olilwayo, nokuba zingaphi na iintshaba ezikhoyo!
Sinezinto ezininzi ezintle esinokuthetha ngazo xa kufikwa kwiiHacks zethu eziQinisekayo, kodwa enye yezona zinto zibalulekileyo luphawu abaphulukene nazo abaphuhlisi bayo kuba kukukhusela ukukopela. Iindlela zethu zokukhusela zikhuselekile kwaye zifumaneka kuphela ngezixhobo ezifumaneka apha kwiGamepron, inika uxolo lwengqondo kubo bonke abasebenzisi bethu. Nokuba uyakopa kwiakhawunti entsha kraca okanye oyisebenzisileyo kangangeminyaka, siceba ukugcina bonke abathengi bethu bekhuselekile kwiziphumo zokukopela.
Nge-100% engakhange ibonwe, ungenza nantoni na ongathanda ukuyenza eValorant, njengoko ukwenza inkqubela phambili kuya kuba yimpepho (ukuya
Nditsho kancinci). Sikwanayo nenkqubo yokuxhasa abathengi engakholelekiyo ukuba uyiqwalasele apha kwiGamepron, ke ukuba kukho nayiphi na imiba ejikeleze iiHackorant Hacks zakho kunye nokukhohlisa, ungathandabuzi ukunxibelelana nathi. Umdlalo omtsha kwaye ngelixa isixhobo sethu sisesitsha, siza kuqhubeka sihlaziya ukuqinisekisa ukuba abathengi bethu bayonwabile ngokuthenga kwabo!
Kutheni iiHacks zethu eziQinisekayo
I-Valorant ayingomdlalo ofuna ukuwudlala ngokuzonwabisa, kuba uninzi lwabantu luya kuwo njengendawo yokukhuphisana. Oku kuthetha ukuba baninzi abadlali abakumgangatho ophezulu abakulungeleyo ukukhaba amazinyo akho, kodwa ungakhathazeki! Ngokusebenzisa iiHacks zethu eziQinisekayo, uza kubeka endaweni yokungaphumeleli nje kodwa wonwabe ngakumbi xa usenza njalo.
Kutheni iAvotot yethu eyiValorant
Ilungelo leValorant Aimbot lelinye eliguqula indlela yakho ngokupheleleyo. Awudingi ukuzimela ezithunzini kwaye ulinde ithuba lokubulala umntu, ungadlala ngokundlongondlongo kwaye ulandele wonke umdlali owubonayo! Uya kufumana amanqaku ngakumbi, intlonipho ngakumbi, kwaye wonwabe ngakumbi ngelixa udlala umdlalo xa iValorant Aimbot yethu yenziwe yasebenza. Akukho lahleko kwakhona kuwe!
Kutheni i-ESP yethu eyiValorant
Inqaku elipheleleyo lokuthenga ukufikelela kwiiHacks zethu zeValorant kungenxa yokuba zikuvumela ukuba ube nethuba. Ufuna ukufumana ubuninzi besandla esiphezulu kangangoko kunokwenzeka, kwaye ukuqokelela ulwazi usebenzisa i-Valorant ESP ngokuqinisekileyo kuya kunceda. Uyabona ukuba iintshaba ziphucule izixhobo okanye nokuba ziphantsi kwimpilo. Yiya kutshaba olubuthathaka okanye ukhethe ii-campers nge-ESP yethu eyiValorant.
Kutheni iWallhack yethu eyiValorant
Kubonakala ngathi konke okunye ukufa ojongana nako eValorant kungenxa yomntu omise inkampu okanye okhawulezayo ukuphuma kwikona. Njengokuba kunjalo, ungasebenzisa iValorant Wall Hack ukubona izoyikiso ezinokubakho ezifihle emva kweendonga kunye neenkampu zobomi babo kude- ngeli xesha ungazimela kubo kwaye uhlanganyele okusesikweni okukhawulezayo! Iikampu azizange ziphumelele, siyayazi le nto.
Kutheni le nto iNorecoil yethu eyiVororant
Ukufumana kwakhona kuya kuba yingxaki enkulu kubadlali abatsha, njengoko kuya kuba nefuthe elibi kwindlela ochanekileyo ngayo ukudubula kwakho. Awunakho ukutyibilika xa kufikwa kumba wokuchaneka, kwaye ukuba awufuni kuyenza “icace” ukuba uyakopela kunye neValorant Aimbot, usebenzisa umsebenzi wethu weValorant NoRecoil kufuneka ibe yeyona nto ilungileyo onokuyisebenzisa. Injongo yakho iya kuhlala iyinyani ngomsebenzi wethu weNoRecoil osebenzayo.
Ungazikhuphela njani ezona hacks zilungileyo?
Okokuqala, kuyakufuneka uthenge isitshixo semveliso kuthi. Nje ukuba ukhusele isitshixo semveliso kwiGamepron, ungayisebenzisa ukufumana ukufikelela kuyo nayiphi na eyamangalisa iiHackorant Hacks- inkqubo yokukhuphela / yokufaka ilula kwaye iyazenzela ubukhulu becala! Ukuba awufuni kulwa nofakelo olwenziweyo kwiiHackerant Hacks zakho, uya kuyithanda into eneGamepron kubathengi bayo.
Kutheni le nto iiHackorant hacks zakho zibiza kakhulu kunezinye
I-Gamepron yinkonzo ekhethekileyo enokuthi ifumane kuphela inani elithile labantu ngexesha. Kukho kuphela inani lokukhetha elinokufumaneka kubasebenzisi bethu, kwaye ngenxa yoko, kufuneka sibize "ixabiso leprimiyamu" ukuqinisekisa ukuba asinabantu abaninzi abafikelela kwiseva ngaxeshanye. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa ikopi yethu ayi-100% ayifumaneki!
Sinezinto ezintathu onokukhetha kuzo kubasebenzisi apha kwiGamepron, zonke ezi ziya kukuvumela ukuba uphathe iimfuno zakho zokugenca nangona uziva ulungile. Unokukhetha ukuthenga isitshixo semveliso esisebenza yonke imihla, ngenyanga, okanye ngonyaka; besifuna ukunika abasebenzisi bethu ukhetho oluninzi kangangoko kunokwenzeka kwaye sizive ngathi ezi ndlela zintathu zezona zilungileyo zokuzisebenzisa.
Kuhle Iyasebenza yimfumba Iimbonakalo